Fanakaikezana ny fitantanana ny faritra | Fiaretana haran-dranomasina
Ho fanampin'ny fitsipika hanohanana ny fitantanana maharitra, ny fandrindrana ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny fomba fitantanana ny tontolo iainana / faritra amin'ny fiompiana anaty rano dia afaka manampy amin'ny fitodihana amin'ny ankapobeny ny fiantraikany amin'ny tahiry dia, ny fiatraikany any amin'ny honenana, ny fandotoana ny rano ary ny aretina. Ny drafitra habakabaka an-dranomasina dia mitaky ny fahatakarana ny ady amin'ny tontolo iainana sy ny ranomasina, ny fandinihana ny manodidina ny ranomasina amin'ny alàlan'ny angona, ary ny fitadiavana toerana mampihena ny fifanolanana.
Ity ambany ity dia fampahalalana momba ny fomba fijerin'ny tontolo iainana ny zaridaina, mampiseho zona fampandrosoana ny fiompiana anaty loko maitso sy ireo faritra tsy dia tsara loatra ho an'ny fiompiana anaty akondro amin'ny volomboasary. Ny zaridaina finfish dia tokony hipetraka amin'ny ala honko sy ny haran-dranomasina ary amin'ny rano lalina kokoa mba hampitomboana ny onja sy ny fivezivezena, hampihena ny fifanolanana amin'ny faritra ampiasaina amin'ny jono, fizahan-tany ary indostria hafa.
Fomba fijery ny tontolo iainana amin'ny tontolon'ny fiompiana anaty rano, mampiseho zona fivelarana fiompiana anaty loko maintso sy faritra tsy dia tsara loatra amin'ny fivezivezena akondro amin'ny voasary. Sary © The Conservancy voajanahary
Amin'ny fampiasana ny tontolo iainana na fomba fitantanana ny faritra, ny fahazoan-dàlana sy ny fitantanana ny fiompiana anaty trondro dia miova avy amin'ny tranga avelan'ny tranga isan-karazany mankany amin'ny fomba tontolo iainana ekolojika feno kokoa. Ity fomba fiasa ity dia mifantoka amin'ny famaritana ireo faritra mety hampivelatra ny fiompiana anaty akondro izay mety hisian'ny fambolena fiompiana anaty rano. Farany, ny fizotrany dia mitondra any amin'ny fambolena fiompiana anaty akondro amin'ny faritra maharitra tontolo iainana sy toekarena.
Tsy ny faritra amoron-dranomasina rehetra no afaka mampiantrano tranom-boaloboka noho ny halalin'ny rano ambany, onja kely, fonenana mora tohina, na fisian'ny indostria hafa. Ireo singa ara-toekarena izay misy fiatraikany amin'ny asa andavan'andro ny fiompiana trondro toy ny halaviran'ny morontsiraka sy ny fidirana amin'ny sambo dia zava-dehibe amin'ny asa isan'andro. Rehefa mikasa ny hanangana toeram-piompiana trondro vaovao dia tsy maintsy jerena ny lisitry ny masontsivana manan-danja hanombanana ny fahafahan'ny toerana mety hitranga.
Lisitry ny fisafidianana ny toerana misy fiompiana finfish
Ny fikajiana tontolo iainana, politika, fitsipika, sosialy-kolontsaina, fampandehanan-draharaha ary logistika hodinihina mandritra ny fipetrahana amin'ny fiompiana trondro dia tafiditra ao amin'ny lisitry ny lisitry ny fizahana fiompiana finfish. Sintomy ny lisitra misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEtomanokatra fisie PDF .
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFizarana zana-pambolena, fisafidianana ny toerana ary ny fitantanana ny faritra eo ambanin'ny fanatodihana ny tontolo iainanamanokatra fisie PDF